အဝေးမှုန်ခြင်း နှင့် Amblyopia ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
ခွေးတွေမှာလည်း အတွင်းတိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။
ခွေးမျက်လုံးတွေ ဘာကြောင့်ဖြူလာတာလဲ။ အတွင်းတိမ်ဖြစ်ပါသလား။ ငါ့ခွေးက ဘာကြောင့် အတွင်းတိမ် ဖြစ်တာလဲ။ အတွင်းတိမ်သည် မှန်ဘီလူး၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ မှန်ဘီလူးကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် မှန်ဘီလူးတောင့်တောင့် အလင်းမှုန်မှိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အတွင်းတိမ်ကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်...
သင့်မျက်လုံးအတွက် မျက်ကပ်မှန်ကို မှန်ကန်စွာဝတ်ဆင်တတ်ရန် သင်ယူပါ။
မျက်ကပ်မှန်များကို မျက်ကပ်မှန်ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပြီး အမြင်အာရုံကို ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် မျက်လုံးကို ကာကွယ်ရန် မျက်လုံး၏ မျက်ကြည်လွှာတွင် တပ်ဆင်ထားသော မှန်ဘီလူးများဖြစ်သည်။ မျက်ကပ်မှန်များသည် အဝေးမှုန်ခြင်း၊ အဝေးမှုန်ခြင်း နှင့် အမြင်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းစသည့် အလင်းပြန်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိသော လူနာများအတွက် ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုများကို ဆောင်ကြဉ်းပေးရုံသာမက ...
အတွင်းတိမ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံတွင် မျက်စိကွယ်မှုနှုန်း အမြင့်မားဆုံးသော မျက်စိရောဂါ ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုတားဆီးရမလဲ? ဘယ်လိုကုသမလဲ?
အတွင်းတိမ်ဟု မကြာခဏ ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော အတွင်းတိမ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြဲတမ်း မျက်စိကွယ်မှုနှုန်း မြင့်မားသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုအများစုသည် အတွင်းတိမ်ရောဂါကို ခံစားရပြီး အပျော့စားများသည် အမြင်အာရုံအပေါ် အနည်းငယ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပြင်းထန်သူများတွင် အချိန်မီ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း မရှိခြင်းသည် မျက်စိကွယ်ခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်...
ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းကို သွားဖူးပါသလား။ ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အသစ် ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုသည် မရေမတွက်နိုင်သောလူများ၏ ဉာဏ်ပညာနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို စမ်းသပ်ပြီး Chengdu ရှိ လူများ၏ဘဝများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၏အလုပ်သည် လူများစွာ၏ဘဝမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်မှာ သေချာသော်လည်း ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလုပ်မှာ အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဒေါက်တာ Trude အနေဖြင့်...
သင့်မျက်လုံးမှာ ဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိနေပါသလား။ အလေးအနက်ထားရမယ်။
1. အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးရခြင်းက ဘာတွေလဲ။ မျက်လုံးက ကင်မရာနဲ့တူတယ်။ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးတွင် မူမမှန်ခြင်းသည် အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ အလင်းယိုင်မှုအမှားများ၊ အတွင်းတိမ်၊ keratopathy၊ fundus ရောဂါ၊ uveitis နှင့် မျိုးရိုးဗီဇမျက်လုံးရောဂါများကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ မျက်လုံးအနောက်ဘက်ရှိ အမြင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ်...
ကြယ်ကို မျက်စိမှိတ်ထားပါ၊ သင့်ကလေး၏ "မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း" ကို ကာကွယ်ပါ
မကြာသေးမီက အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်သည် ကလေးသူငယ်များနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များတွင် အဝေးမှုန်ခြင်းကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သောနည်းပညာများဆိုင်ရာ အမျိုးသားရှေ့ပြေးလုပ်ငန်း ဒုတိယအသုတ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး “ကလေးသူငယ်များတွင် အဝေးမှုန်ခြင်းမှ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ သင့်လျော်သောနည်းပညာလမ်းညွှန်ချက်များ...
Shidakang ကုမ္ပဏီသည် ပထမဆုံး ချန်ဒူး ချုံကင်း စီးပွားရေးစက်ဝိုင်း ကျန်းမာရေး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုန်စည်ပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကုန်စည်ပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၁ ရက်အထိ ချန်ဒူးမြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ပြပွဲဗဟိုဌာန လက်အောက်ရှိ ချန်ဒူး ရာစုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ပြပွဲဗဟိုဌာနတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုန်စည်ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့သည်။
အဝေးမှုန်ခြင်းကို တားဆီးထိန်းချုပ်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတအရှိဆုံးနည်းလမ်း
21-07-29 ရက်နေ့တွင် admin မှ
တိရစ္ဆာန်နှင့် လူသားတို့၏ သုတေသနပြုမှု၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့်၊ မြင့်မားသောအလင်းရောင်သည် အရင့်ကျက်ဆုံးသီအိုရီဖြစ်သည်။ အလင်းတိုးခြင်းသည် အဝေးမှုန်ခြင်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတအရှိဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်ပနေရောင်ခြည်ပြင်းအားသည် အိမ်တွင်းအလင်းရောင်ပြင်းအားထက် အဆရာနှင့်ချီ မြင့်မားသည်။ စာမေးပွဲအတွက်...
SDK သည် သင့်မျက်လုံးကို ဂရုစိုက်ရန် သတိပေးသည်။
မျက်စိကိုချစ်မြတ်နိုးပါ ကလေးများတွင် အဝေးမှုန်ခြင်းပြဿနာကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက အမြဲစိုးရိမ်နေပါသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းက ကလေးများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေသည့် ငယ်ရွယ်သောအရွယ်တွင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း မြင့်မားလာသည်ကို ပြသခဲ့သည်။
SDK သည် အတွင်းတိမ်အလင်းပြန်နိုင်သော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်း၊ မျက်စိပညာဌာနခွဲ၊ မျက်စိရောဂါဗေဒဌာနခွဲနှင့် မျက်စိရောဂါဗေဒဌာနခွဲ၏ အတွင်းတိမ်နှင့် အတွင်းသားမှန်ဘီလူးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် "၂၀ကြိမ်မြောက် အတွင်းတိမ်နှင့် အလင်းပြန်ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားညီလာခံ (CSRCS)"၊
No.319၊ ရေလက်ကြားနည်းပညာစက်မှုဥယျာဉ်၊ Qingtao လမ်း၊ Chengdu၊ Sichuan၊ တရုတ်